यी हुन् वाम गठवन्धनलाई जिताउनु पर्ने २४ कारण – Contemporary News Portal From Nepal
प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०७४, मंगलवार १२:३६
डा. युवराज खतिवडा १. एकतन्त्रीय, राजतन्त्रात्मक र सामन्तवादी राजनैतिक व्यवस्थाको अन्त्यदेखि नेपाली नागरिकको सार्वभौेमसत्तामा निहित गणतन्त्रको स्थापना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने संविधान जारी गर्न सवैभन्दा वढी क्रान्तिकारी भूमिका कसले निर्वाह गर्यो ? सवैभन्दा लामो यातनापूर्ण जेल जीवन कसले भोग्यो ? सवैभन्दा वढी शहादत कसको भयो ? सवैभन्दा अविचलित र त्यागपूर्ण संघर्ष कसले गर्नुपर्यो ?
यी माथिका सवै प्रश्नहरुको एउटै उत्तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको वाम गठवन्धन हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै सरकारमा भएको वेला यी कार्यहरु गरेको हो । सरकारमा रहेको वेला होस्, वा वाहिर रहेकै वेला किन नहोस्, विकासका मुद्दामा सधैं अग्रपंक्तिमा रहेको पार्टी एमाले नेतृत्वको वाम गठवन्धन हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत पाउन योग्य र उपयुक्त उम्मेदवारहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा वाम गठवन्धनका उम्मेदवारहरु नै हुन् । चक्रपथबाट साभार गरिएको
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार १२:३६ मा प्रकाशित